I-CBE, umboniso wezorhwebo we-CIPM uyeza, zilungiselele. Usihlalo Mnu Zhang Epreli. 19
Ngo-Meyi kulo nyaka, kukho imiboniso emibini ebalulekileyo kumzi-mveliso, enye yi-CBE Shanghai Expo yoBuhle ukusuka nge-12 ukuya kwi-14, enye i-Qingdao National Exhibition Machinery Expo ukusukela nge-10 ukuya kwi-12. NgoMvulo ebusuku, iqela lokuthengisa lahlangana, kwaye Umongameli uZhang we ...
Ukutya okuthe nkqo kweNkqubo yokuLayida ngokuthe nkqo kwe-Skey-Shell-Conning, ngo-Epreli 16, 2021 Abathengi abavela kwi-G Provincial Bio-medical Institute banike imvume yokuhambisa i-S605 emva kophando olusentsimini olukhatshwa nguSihlalo weShell-Conning Mnu. ..
I-COVID-19 yesixhobo sokuhambisa iziyobisi kubungakanani bemakethi, isabelo, imfuno, imikhwa, uhlalutyo loshishino, amanani-manani kwihlabathi ngo-2021
Isiseko sedatha seDatabridgemarketresearch.com songeze "i-COVID-19 yeDrive yokuThengiswa kweziXhobo kwiNtengiso-yeTekhnoloji yoShishino kunye noQikelelo kwi2028". Ingxelo yephepha ububanzi: iigraphics ezingama-350: iitafile ezingama-60: ama-220 amaphepha Imakethi yezixhobo zokuhambisa iziyobisi ze-COVID-19 ichaza imbonakalo yolu shishino ...
Ukubalwa kweentsuku eziyi-8! I-S-conning ikumema kwi-Shanghai CPhI kunye ne-P-MEC China!
Ukubalwa kweentsuku eziyi-8! I-S-conning ikumema kwi-Shanghai CPhI kunye ne-P-MEC China! I-P-MEC China, umboniso wamazwe aphesheya odibanisa iimveliso ezikhokelayo zamanye amazwe kunye namashishini adumileyo alapha ekhaya, aya kubanjelwa eShanghai New International Expo Centre esuka eDecem ...
Ukuziqambela izinto ezintsha, ukuziphathela inkqubo yokubhalwa kweleta enemilenze eyi-S400 yezirinji ezilahlwayo • Ukulebhelisha okuzenzekelayo kunye neplunger indibano Isantya esimileyo: 400pcs / ngomzuzu; • Ityhubhu yenaliti yokutyhiliza, ukutyhala intonga, ibar ye-torsion kunye nelebheli yolwakhiwo lweCompact nge
Isinikezeli sakho sokuphendula ngokubonisa isisombululo selebhu S-conning Tech. ngoku unikezela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu!
Isinikezeli sakho sokuphendula ngokubonisa isisombululo selebhu S-conning Tech. ngoku unikezela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu! I-S-conning Tech group LTD ngumenzi ohamba phambili woomatshini, ukusukela ngo-2009.
Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo,